စွန်းခဲ့တဲ့ မှဲ့တစ်ပေါက် အကြောင်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
စွန်းခဲ့တဲ့ မှဲ့တစ်ပေါက် အကြောင်း
စက်တင်ဘာ 10, 2019 M.D., Ph.D Saroj Suvanasuthi, M.D.
တွေ့နေကျပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ “မှဲ့” ဟာ ကင်ဆာမှဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပေါ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ “မှဲ့”တွေ ပွင့် မပွင့် သိနိုင်စေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ regular body scan လို့ ခေါ်တဲ့ ပုံမှန် စစ်ဆေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်လုံးမှာ “မှဲ့” တစ်ရာကျော် ရှိသူဟာ မှဲ့နည်းနည်းပဲ ရှိသူထက် melanoma (မီလန်နိုမာ အရေပြားကင်ဆာ) ဖြစ်နိုင်ချေ ၇ဆ ပိုများပါသတဲ့။
မှဲ့တွေကို ပေါ့ပေါ့ဆဆ မထားပါနဲ့။ အရေပြားကင်ဆာရဲ့ အချက်ပြသင်္ကေတ ဖြစ်တာမို့လို့ စောစောသိလေ ကောင်းလေပါ။
ဦးကကြီး ဟာ သူ့လက်မောင်းမှာ မှဲ့အသစ်တစ်လုံး ပွင့်လာတာ သတိထားမိတယ်။ သိပ်မကြိုက်ဘူး။ အရုပ်ဆိုးတယ်လဲထင်လို့ ဆေးရုံသွားပြီး မှဲ့ကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ လုပ်ခဲ့တယ်။ မှန်ဘီလူးနဲ့ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ မှဲ့ဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ကြောင်း သိလိုက်ရပါတယ်။ ကင်ဆာသဘောပါတဲ့ မှဲ့မျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ အရွယ်အစားကတော့ ၂ မီလီမီတာ ပဲရှိတာမို့ လှီးထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရောဂါဗေဒ ပညာရှင်က ဒါဟာ အရေပြားကင်ဆာဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါတယ်။ သူသာ ၆ လလောက် နောက်ကျ ပြီးမှ လာခဲ့ရင် အခြား ရောဂါရှာဖွေမှုတွေပါ လုပ်ပေးရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ရည်ကြောအကျိတ်တွေ စစ်ဆေးတာ၊ ခီမိုဆေးပေးတာ၊ ဓာတ်ကင်တာတာတွေအပြင် လှီးထုတ်လိုက်တဲ့ အရေပြားအတွက် ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီနဲ့ အစားထိုးတာတွေဘာတွေ လုပ်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မွေးဖွားသည်မှစလို့ သေဆုံးချိန်အထိ လူတွေမှာ မှဲ့ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြောင်းအလဲပေါင်းများစွာ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့က အရောင်ရင့်ရင့်၊ တစ်ချို့က ခပ်မှိန်မှိန်၊ တစ်ချို့က ကြီးကြီး၊ နောက်တော့ ပျောက်သွားပြန်ရော..။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း သေရာပါ။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်က တိုက်ထုတ်ပစ်လိုက်လို့ “လစ်” သွားရော။ အနည်းအကျဉ်းကတော့ ကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်သတဲ့။ မှဲ့ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားတွေ အများကြီးရှိတာမို့ တိတိကျကျ ပြောဖို့တော့ ခက်သားလား။ မျိုးရိုးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်တို့ ဟော်မုန်းတို့၊ နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့တာများလို့၊ oxitative stress လို့ ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အင်တီအောက်ဆီဒင့် နဲ့ ဖရီးရာဒီကယ်တို့ ဟန်ချက်မညီတာ မျိုး ဖြစ်နေလို့၊ ဇီ၀ဖြစ်စဉ်ကြောင့်၊ ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် စသည့်ဖြင့် စုံလို့ ပါပဲ။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ပေါ်မှာ ဘယ်မှဲ့က နဂိုကတည်းကရှိတာ၊ ဘယ်မှဲ့ကတော့ဖြင့် အသစ်ထွက်တာ၊ ဘယ်မှဲ့ ကတော့ ကြီးလာတာ၊ ဘယ်ဟာကတော့ စိတ်ပူရမှာ စတာကို သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီတော့ body scan လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်စစ်ဆေးမှုလုပ်တာဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ ကောင်းတဲ့ အချက် တစ်ချက်ကတော့ အိမ်မှာတင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်နိုင်တယ်လေ။ အစီအစဉ်တစ်ခုချပြီး လစဉ် ပုံမှန် စစ်ဆေးပေါ့။ မှန်ရှေ့ မှာ တစ်ကိုယ်လုံးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် သေသေချာချာကြည့်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မှဲ့ ဘယ်နှလုံး ရှိလဲဆိုတာ တတ်နိုင်သလောက် ရေတွက်ပြီး မှတ်ထား။ သူငယ်ချင်းတို့ မိသားစုတို့ကို အကူအညီတောင်းပြီး နောက်ကျောတို့ ခေါင်းတို့မှာကြည့်ခိုင်း။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မှဲ့ တွေ တွေ့ရင် နှစ်စဉ် ဆေးရုံမှာ total body mapping လို့ခေါ်တဲ့ နည်းနဲ့ မှဲ့တွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့နည်းတွေသုံးပြီး စစ်ဆေးပါ။
”Total Body Mapping” ဆိုတာ ဘာလုပ်တာလဲ။ ဆေးရုံမှာ လုပ်ရတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ဓာတ်ပုံ ၂၀ ရိုက်ယူတယ်။ ကင်ဆာသဘောပါတဲ့ မှဲ့ ရှိမရှိ dermoscope ဒါမိုစကုပ် ဆိုတာကြီးနဲ့ ကြည့်တယ်။ ပုံအားလုံးကို မှတ်တမ်းယူထားပြီး တစ်နှစ်တစ်ခါ annual body mapping လုပ်ပြီး ပြောင်းလဲမှုကို ယှဉ်ကြည့်တယ်။ ဒီနည်းနဲ့ မှဲ့ အသစ် ပွင့်မပွင့်ဆိုတာတင်မကဘဲ ရှိပြီးသားမှဲ့တွေ ပုံသဏ္ဌာန် ပြောင်းလား၊ အရွယ်တို့ အရောင်တို့ ပြောင်းလား သိနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်မှာ မှည့်တွေ အများကြီး ရှိနေရင်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိတာများလို့ အရေပြားတွေ အိုမင်းရင့်ရော်နေရင်၊ အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးရင် စတဲ့သူတွေအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ “မှဲ့” တစ်ရာကျော် ရှိသူဟာ မှဲ့နည်းနည်းပဲ ရှိသူထက် melanoma (မီလန်နိုမာ) လို့ခေါ်တဲ့ အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ၇ဆ ပိုများပါသတဲ့။
မှဲ့ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ABCDE ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ A ဆိုတာ Asymmetry. အသားအရောင် မညီတာ။ သိပ် ကိစ္စမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ကို ပြထားတာတော့ ကောင်းပါတယ်။ B က Border. မှဲ့ ရဲ့ အနားသတ်လေးတွေက တိတိကျကျလေး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် စိတ်ပူစရာ မရှိဘူး။ အနားတွေက ဇောင်းထ နေမယ်၊ လှိုင်းလေးတွေလို ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စနည်းနည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ C ဆိုတာက Colour. အရောင်။ မှဲ့က တစ်ရောင်ပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ နှစ်ရောင်စပ်တွေဘာတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ပြကြည့်ပါ။ D က diameter. အချင်း။ မှဲ့ တစ်လုံးရဲ့ အချင်းဟာ ၆ မီလီမီတာထက် ကြီးနေပြီဆိုရင်တော့ အရေပြားအထူးကုနဲ့ ဆွေးနွေးရပါလိမ့်မယ်။ E က Evolution. မှဲ့ အသစ်ထွက်တာတို့၊ ရှိပြီးသား မှဲ့ တစ်ခုခု ပြောင်းလဲလာတာတို့ ဆိုတာ ဒုက္ခရောက်တော့မယ့် နိမိတ်တွေပဲ။ မှဲ့ ဟာ အဖတ်လိုက်ကွာလာတာ၊ ထွက်ကျလာတာ၊ ယားတာ၊ သွေးထွက်တာ၊ ပေါက်သွားတာ စတာတွေဖြစ်လာရင်တော့ “ဆရာဝန်ဆီ ပြေးပေတော့ ဗျို့ ..” လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
တခြားကင်ဆာတွေလိုပဲ အရေပြားကင်ဆာဟာလည်း စောစောသိရင် ကုဖို့ ပိုလွယ်ပါတယ်။ အရေပြားကင်ဆာမှန်းသိဖို့ အကောင်းဆုံးကတော့ သေးနေတုန်းနဲ့ အပေါ်ယံအရေပြားမှာပဲ ရှိနေတဲ့ အဆင့် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့် အကြီးချဲ့နိုင်တဲ့ ကင်မရာနဲ့ဆိုရင် အရေပြား ပထမအလွှာမှာ ရှိတဲ့ မှဲ့ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံကို သေသေချာချာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မှဲ့တိုင်းဟာ အရေပြားကင်ဆာ မဟုတ်သလို အရေပြားကင်ဆာဖြစ်တိုင်းလည်း မှဲ့ ထွက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အရေပြားကင်ဆာဖြစ်လို့ သေဆုံးကြရတာမှာ ဒီ မီလန်နိုမာ အရေပြားကင်ဆာကြောင့် ဖြစ်တာ အများဆုံးပဲ။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုလုပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုံခြုံရေး ယူထားပါလို့လည်း ပြောချင်ပါတယ်။
မီလန်နိုမာ ဆိုတာ melanocyte ဆဲလ်တွေကနေ ဖြစ်လာတာပါ။ မီလန်နိုဆိုက်ဆဲလ်တွေဟာ အရေပြားရဲ့ အပေါ်ဆုံးအလွှာမှာ တွေ့နိုင်ပြီးတော့ နေရောင်ခြည်မှာပါတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ရောင်ခြည်တွေကျရောက်မှု ကနေ အရေပြားကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ melanin မီလနင်ဆိုတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ အဲဒီ မီလန်နိုဆိုက်ဆဲလ်တွေဟာ ဗီဇ ပြောင်းလဲလာပြီး ဒုက္ခ ပေးတော့တာပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို အချိန်မီ တားဆီးနိုင်မှ မီလန်နိုဆိုက်ဆဲလ်ကနေ ကင်ဆာအဆင့်အထိ ရောက်မသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ အရေပြားကို နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကနေ ကာကွယ်ရမယ်။ အရောင်နုတဲ့ အဝတ်အစား လက်ရှည်တို့ ဘောင်ဘီရှည်တို့ ဝတ်ရမယ်။ မျက်နှာနဲ့ လက်တွေကို နေရောင်ကာခရင်မ်တွေ လိမ်းရမယ်။ လစဉ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကို စေ့စေ့စပ်စပ်ခံယူပြီး ပြဿနာကို စောစီးစွာ သိနိုင်ဖို့ လုပ်ရမယ်။ နှစ်စဉ် မှဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ဆရာဝန်ကို အသိပေးမှ ဆရာဝန်က ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကို မိအောင်ဖမ်းနိုင်မယ်။ စစ်ဆေးမှုရလဒ်မှာ မင်နီ ပြ နေပြီဆိုရင်တော့ အသားစ စစ်ဆေးဖို့ ယူရတော့မယ်။ ရောဂါဗေဒဆရာဝန်က သင့်ရောဂါကို အတည်ပြုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မီလန်နိုမာ အရေပြားကင်ဆာကို အဆင့် ၀ ကနေ ၄ အထိ ခွဲထားပါတယ်။ အဆင့် ၀ ကတော့ ကုဖို့ အလွယ်ဆုံးပေါ့။ လှီးထုတ်ပစ်လိုက် ပြီးတာပဲ။ အဆင့် ၄ ဆိုရင်တော့ တခြားဟာတွေကိုပါ ပြန့် နေပြီ လို့ ဆိုပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ပြန်ရည်ကြောအကျိတ်တွေကတစ်ဆင့် ပေါ့။ ဒီအဆင့်မှာဆိုရင်တော့ ကင်ဆာဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်က ဓာတ်ကင်ခြင်းနဲ့ ခီမိုသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကုထုံးတွေကို ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ A အဆင့် မီလန်နိုမာဆိုရင်တော့ စောစောကပြောခဲ့သလို လှီးထုတ် ပစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ ပတ်ခြာလည်က အရေပြား အကောင်းတွေကိုပါ ဝိုက်ပြီး လှီးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လှီးထုတ်တဲ့ ဧရိယာ နည်းနည်း များသွားရင်တော့ ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီနဲ့ အရေပြားကို ပြန်ဖြည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နို့မို့ဆို အမာရွတ်ကြီးနဲ့ အလှ ပျက်မယ်လေ နော့။
ရှေးလူကြီးတွေက မှဲ့ကိုကြည့်ပြီး သင့်ကံကြမ္မာကို ရှေ့ ဖြစ် ဟောလို့ ရတယ်တဲ့။ အယူသည်းတာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်ဟာ မှန်ပါတယ် လို့ …..
“စွန်းခဲ့တဲ့ မှဲ့တစ်ပေါက်”ကို ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပြီး အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက် “ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် – အလှရှင်” လေးတွေဖြစ်ကြပါစေ လို့ ဆန္ဒ ပြုလိုက်ရပါတယ်။
စွန်းခဲ့တဲ့ မှဲ့တစ်ပေါက် အကြောင်း မှဲ့တွေကို ပေါ့ပေါ့ဆဆ မထားပါနဲ့။ အရေပြားကင်ဆာရဲ့ အချက်ပြသင်္ကေတ ဖြစ်တာမို့လို့ စောစောသိလေ ကောင်းလေပါ။
User rating:2out of5with4ratings
M.D., Ph.D Saroj Suvanasuthi, M.D.
The First Class Honors M.D., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, 2002 Mahidol University , 2002